‘जखमले’ नेतृत्व र जनताको अपेक्षा
१७ मंसिर २०७७, बुधबार ०५:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं
अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद हामीले विकास गरेको संरचनाका कारण उत्पन्न भएको हो । किनभने, त्यो संरचनाले आजको समयमा कुनै संगति नै राख्दैन । आज हामीलाई हाम्रो राष्ट्रको सामाजिक वाणीलाई अभिव्यक्ति दिने खालको जुन संरचना चाहिन्थ्यो तर त्यो संरचनाको अभाव रह्यो । यस वीचमा हामीले एक वा दुई व्यक्ति मातहतको भीडजस्तो संरचना बनायौं । त्यसले आजको नेपाली समाजको भावनालाई अभिव्यक्ति गर्ने र त्यसलाई दिशा दिने काम गर्दैनथ्यो । आजको ‘करिस्मयाटिक’ नेतृत्व भनेको पुँजीवादी युगको जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने सामूहिक र संस्थागत नेतृत्वमा विकसित हुनुपर्ने थियो तर त्यो संरचना नबनेको हुनाले अहिले स्थिति एकातिर, नेतृत्व अर्कातिरको विरोधाभास प्रकट भएको हो ।
अहिले मुलुकका सामु तीन ठूला चुनौती छन् । पहिलो– कोरोना माहामारी, दोस्रो– गहिरिँदो आर्थिक संकट र तेस्रो– मुलुकभित्र झन्झन् डोलिँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब । यी यस्ता गम्भीर चुनौतीबारे पार्टीमा कुनै कोणबाट बहस, छलफल भएको देखिँदैन । ती कुरा प्राथमिकतामा आउँदैनन् । अनि तँ ठीक र म ठीकका जुन झगडा छन् । त्यो झगडा पनि राज्य र पार्टीबीचको हुनुपर्ने समन्वयलाई पार्टीबाट राज्यका शक्तिहरूले देखाएको अरुचि, उपेक्षा, उदासीनता आदिका कारण उत्पन्न भएको हो अहिले । हामीलाई उपेक्षा ग¥यो भन्ने सरकारमा नगएका पार्टीका मान्छेहरू, हामी जे पनि गर्ने म्यान्डेट लिएर गएका हौं भन्ने सत्तामा जानेहरू । यसमा पनि धेरै चाहिँ वैयक्तिकपन झल्कन्छ । र खासमा राज्यले, सरकारले पार्टीलाई उपेक्षा गरेकै हो । निर्णय प्रक्रियामा पार्टीलाई सामेल गर्ने, पार्टी प्रक्रिया भित्रबाट निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने काममा राज्यमा गएकाहरूले उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो संस्कार करिबकरिब माथिदेखि तलैसम्म छ । पार्टी करिबकरिब ‘डिफ्रिज’जस्तो अवस्थामा छ । अढाइ वर्ष हुँदासम्म पार्टी एकताले पूर्णता पाएको छैन । सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएकै कारण यो काम हुन सकेको छैन । सत्तामा बस्ने साथीहरूले आफूलाई विशेष ‘प्रिभिलेज’ खोजे । पार्टीलाई नजरअन्दाज गरे । राज्य र पार्टीबीच कामको तालमेल सत्तामा रहेका साथीहरूको प्राथमिकतामा परेन ।
अहिलेको नेतृत्व कालातीत भयो । पुरानो नेतृत्व जसले अतीतका परिवर्तनका निम्ति जुन अगुवाइ ग¥यो । त्यो सराहनीय छ । यसका लागि धन्यवाद दिने, प्रशंसा गर्ने, जेजे गर्ने हो त्यो सबै गर्ने हो । तर, आजको नेपाली समाजलाई नेतृत्व गर्न २०४६ सालपछि विकसित भएको नेतृत्वलाई बिदा गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्छ । नयाँ नेतृत्व भनेर ‘जखमले’ नेता खोज्ने होइन । सामूहिक नेतृत्व खोज्ने हो । हामीले हिजो धेरै विसंगति देखिसक्यौं, भोगिसक्यौं । व्यक्तिप्रधान नेतृत्वको ढाँचाको सट्टामा सामूहिकतालाई बोक्ने, अँगाल्ने ढाँचामा जानुको विकल्प छैन । त्यो नसकिने पनि होइन । मदन भण्डारी नहुँदा पार्टी चल्ला र भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । पार्टी चल्यो । मनमोहन अधिकारी गएपछि पार्टीले समाजको त्यो माया नपाउने हो कि भन्ने पनि लागेको हो । मनमोहन गए, मदन भण्डारी गए, तैपनि पार्टी चल्यो त । राजा महाराजहरू गए, मुलुक चलेकै छ । मुलुक चलाउन नसकिने भन्ने होइन । मुलुक चलाउन पार्टीभित्र रहेका असल, समाजमा रुचाइएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, बफादार, इमानदार मान्छेहरूको सामूहिक नेतृत्व विकास गर्नैपर्छ । यसको प्रक्रिया भनेको फेरि पनि महाधिवेशन नै हो । महाधिवेशनले नै छान्ने हो । अहिले प्रधानमन्त्रीको एउटा स्तुत्य काम भनेको ‘यो नेतृत्व हामी सबैले छाडौं र नयाँ पिँढीलाई दिऔं’ भन्ने हो । यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, मस्तक चाहे जेसुकै होस्, त्यतातिर म जान चाहन्नँ । मस्तकमा जाने होइन, एजेन्डामा जाऊ न ।
यसमा यदाकता दोस्रो पुस्ता निरीह भयो, यसले हस्तक्षेप गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन भन्ने खालका टिप्पणी पनि सुनिन्छन् । तर, त्यसो होइन । यो त प्रक्रियाले स्थापित गर्छ । अहिले यो अवस्थामा पनि एउटा आवाज त उठिरहेको छ नि । त्यो आवाजलाई मुखरित गरौं न । सम्बोधन गरौं न । अब ओलीजी, माधवजी, झलनाथजी, प्रचण्डजी, वामदेवजीजस्ता पुराना पिँढीका नेतालाई ससम्मान बिदा गरेर, उहाँहरू कार्यकारी ठाउँमा नरहीकन पार्टीको सेवामा लाग्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सकिँदैन ? नयाँलाई नेतृत्व दिने भन्ने मोटो दिशामा हामीले प्रतिबद्धता देखायौं भने अनि त्यसपछि यसको गृहकार्यमा लाग्न सकिन्छ । साथीहरूको छनोट होला, एउटा प्रक्रियाबाट आउलान् । यहाँ एक व्यक्ति वा कुनै जखमले नेता खोज्नुप¥यो भने हामी अँध्यारोमा परांैला । अस्पष्टता होला । तर, सामूहिक नेतृत्व छान्ने कुरा गर्दा त्यो टिम विकसित गर्न सकिन्छ । नेकपालाई पुनर्जम्म दिने, हिजो प्राप्त गरेको हैसियतमा लिएर जाने तागत भनेको अब त्यही नयाँ नेतृत्व नै हो । पुरानो नेतृत्वबाट यो काम फत्ते होला भन्नेमा कम्तीमा मलाई चाहिँ विश्वास छैन । हिजो जेजस्तो भयो, त्यसलाई हिजोकै ठाउँमा राखौं । इतिहासले त्यसको मूल्यांकन गर्ला । अब उप्रान्त कुनै पनि निर्णय गर्दा पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारमा मात्र अगाडि बढौं । पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने, एकताबद्ध बनाउने, जनस्तरमा पार्टीप्रति रहेको निराशालाई चिर्ने हो भने नयाँ पुुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको विकल्प छैन । त्यसैले म फेरि पनि भन्छु, शक्तिको आशक्तिमा विवेक नगुमाऔं । असन्तुष्टमा उत्ताउलो पनि नबनौं । सात खत माफ तर अब सामूहिक र संस्थागत बनौं ।
मिसनसँग आज हाम्रो नेतृत्वको संगपति कति देखिन्छ ? आम दुनियाँ जगतले दुई तिहाइको जनमत दिएको यो पार्टीको कार्यशैली, गतिविधि जनचासोसँग सरोकार राख्नेछन् र ? यस्तो नौटंकी पनि चल्छ पार्टीमा ?
कम्युनिस्ट पार्टीको जुन आदर्श थियो, सामूहिकताको जुन अभ्यास थियो, त्यसका सबै मान्यताहरूलाई हाम्रा नेताहरूले भताभुंग बनाएर व्यक्ति आपूm हिरो बन्ने खेतीपाती सिकाए । गल्ती यही भयो । मिसनको राजनीति गर्नुपर्नेमा शक्तिको राजनीति गर्ने प्रकृति कम्युनिस्ट पार्टीमै हावी भइदियो । यसलाई परिवर्तन गर्नेपर्छ । त्यहाँ तपार्इं हाम्रो स्थान कहाँ भनेर खोज्ने होइन । तल एउटा कार्यकर्ता भएर काम गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । जताततै ‘म पहिला’ भन्ने भावना किन विकास भयो ? कहिलेकाहिँ नेतृत्वका कारण आन्दोलनलाई लर्बराउने बनाउँछ । अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन कस्तो भइदियो भने एकजना नेता सैन्य आन्दोलनबाट उठेका भइदिए । जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट उठेका नेता भइदिए । सैनिक संगठन बनाएर आएका नेता भए । अर्का नेता, जीवनको अधिकांश समय जेलमा बसे । अनि बनिबनाउ संगठनमा छुछु गर्न आइपुगे । संगठन कसरी चलाउने, कसरी बनाउने, पार्टीभित्रका फरक विचारहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै थाहा छैन । पार्टीभित्र भिन्न भिन्न सोच, विचार र चिन्तनहरू हुन्छन् । फर्केर हेरौं न, सिपी मैनालीहरू किन छाडेर गए, राधाकृष्ण मैनाली दरबारसम्म किन पुगे, अशोक राई किन समाजवादी भए, वैद्यहरू किन छुटे, विप्लवहरू किन छुटे, गोपाल किरातीहरू किन छुटे ? समीक्षा गरौं न । हामी के ती हिजो सहिद भएका साथीहरूको रगत, पसिनासँग के साच्चै इमान्दार छौं ? साँच्चै हाम्रो नेतृत्व इमानदार छ ? नेतृत्वको आजको जीवनशैली, उनीहरूका प्राथमिकताले कम्युनिस्टको आदर्शलाई सम्पुष्टि गर्छ ? प्रश्न गरौं न । निष्कर्ष निकालौं न । कहाँ बिग्रियो ? जब हामीले नेतृत्वलाई स्वयम्भू बनायौं, ‘जखमले करिस्म्याटिक’ नेतृत्व विकास गरेर हामीले हाम्रो आन्दोलनभित्र प्राधिकार खोज्यौं । कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गरौं । यसले ऐनऐन मौकामा कहाँकहाँ त्रुटि ग¥यो, कुनकुन त्रुटिबाट कस्ताकस्ता जस्केलाबाट व्यक्तिगत लाभ र अवसरका निम्ति आएको तप्काचाहिँ कसरी पुरस्कृत भयो, खोजौं न हामी । तर, रोग एउटा छ, औषधि अरू खोजी भइरहेको छ अहिले ।
अहिलेको संवादमा जुन औंला ठड्याइ भइरहेको छ, यो राम्रो संकेत होइन । तलको अन्डरकरेन्टको वाणीलाई नेतृत्वले अनुभूत गर्नुपर्छ । जति चाँडो उनीहरूले यसको अनुभूत गर्छ उति चाँडो उनीहरू इतिहासको सकारात्मक मूल्यांकनका निम्ति सुरक्षित हुनेछन् । अहिले पनि म २००८ सालको पुष्पलाललाई सम्झिरहेको छु । मान्छे इतिहासलाई फर्केर पनि हेर्दोरहेछ । अखिलमा हामीले इतिहासको समीक्षा ग¥यौं । अहिले यो नेतृत्वको भोलि अर्को पिँढीले समीक्षा गर्दैन र ? त्यसैले, आज तल्लो तहमा जुन चेतना जागृत भइरहेको छ, त्यसलाई नेतृत्वले बेवास्ता गर्नुहुन्छ । आजको हाम्रो समाज जखमले नेता मान्न तयार छैन । मलाई विश्वास छ, आजका जखमलेहरूले सुधार गर्न सकेनन् भने भोली इतिहासले आफ्नै जखमलेहरू निर्माण गर्छ । र, फेरि पनि ‘साइज’मा लिएर आउँछ । यो सम्भावना म प्रबल देखिरहेको छु । (कुराकानिमा आधारित)
स्थानीय तहमा मनपरी : गतवर्ष मात्रै पिए र सल्लाहकारका नाममा पौने ६ करोड, गाडी खरिदमा अर्बांै स्वाहा
दुई वर्षपछि आज विप्लब सार्वजानिक हुँदै
ओली समूहको संसदीय दलको बैठक भोली
आज कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक, भोली संसदीय दल बस्दै
संसदीय दलको नेताबाट केपी ओली, उपनेताबाट सुवास नेम्वाङलाई हटाउने प्रचण्ड – नेपाल समूहको निर्णय
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक आज
ताप्लेजुङका अग्निपिडितलाई भूकम्पपिडितलाई सरह राहतको माग